Tube Laser Cutting Machine - Laser Golden
Ubude Tube: 6m / 8m
Tube ubukhulu: 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300
CNC isilawuli: Germany PA HI8000
Iintlobo esebenzayo ityhubhu: tube Round, isikwere ityhubhu, tube eziziingxande, tube okweqanda, intsimbi ezimilise-D, intsimbi ezimilise-T, intsimbi ezimilise-H, ijelo sentsimbi, angle intsimbi, njl
Izinto esebenzayo: insimbi, carbon intsimbi, intsimbi kwalenza, ubhedu, i-aluminiyamu, ixina, ingxubevange, njl
Khombisa No .: P2060
Ubuninzi ukulayisha ubunzima: 25kg / m
Tube ubukhulu: 20-200mm
ubude Tube: 6000mm
P2060 / P3080 tube machine laser ukusika ivelisa izahlulo esemgangathweni ophezulu ezahlukeneyo iimilo kunye nobukhulu. Ngokusebenzisa ifayibha laser ukusika iteknoloji yayo, iinkqubo ezininzi zinokudityaniswa zibe kumatshini enye. Ekubeni kwezona ndawo zifuna iinkqubo ezininzi, ezifana sawing yemveli, ukubhola, machining, Ukuhlukunyezwa kunye ngentlabo, P2060 / P3080 ityhubhu ifayibha laser ukusika umatshini unako ukwenza zonke ezi iinkqubo kumatshini owodwa.
Lo laser machine tube ukusika ifakwe umlayishi manual abonisa ukuba ityhubhu ukuya umqhubi wabaviwa emva koko makayifake i ityhubhu kumatshini kwaye ngesandla qinisa chuck. Ukudibanisa zonke ezi nkqubo zibe kumatshini omnye konga ixesha neendleko xa tyhubhu yokwenza ngeebhetshi ezinkulu kodwa oomatshini nsimbi sivumela umsebenzisi ukwenza lula AMAGQABAZA ▸ okanye imveliso batch encinane.
Le tube laser mgawuli nayo isebenzisa isantya servos eliphezulu yokuma ekhawulezileyo ngqo leyo kunciphisa ixesha non-value iintshukumo longeziwe. Ezi servos ngesantya High ngokudibene ne ifayibha laser onamandla ukunciphisa amaxesha inxalenye ukulisika ukwandisa imveliso ukuvumela ukuba imbuyekezo ephezulu yotyalo kumsebenzisi ekupheleni.
Le mgawuli laser ityhubhu Kwakhona mayixhotyiswe ebiyelweyo epheleleyo ukuqinisekisa umqhubi ikhuselekile ngelixa umatshini esebenzayo.
OMKHULU Laser iza kubonelela ngenkonzo epheleleyo kunye nenkxaso yethu oomatshini laser , kuquka isitokhwe epheleleyo abaza kuzisebenzisa kunye namacandelo ukuqinisekisa abaxumi bethu bafumana iindawo indawo ngokukhawuleza nangempumelelo.
Tube laser ukusika features machine
Chuck kunye adjustable isixhobo nokuphakamisa inkxaso uqinisa longe ukondla ixesha, ukuqinisekisa concentricity, ukuthintela kombhobho kufika.
scanning tube Automatic.
Fumana ngokuzenzekelayo Centre
Ukwandisa imveliso, ukuqinisekisa imveliso esemgangathweni.
Phawula iindawo kunye ulandelele ahlabayo.
Fast impendulo lembombo, ukuphucula kakhulu usika ukusebenza.
Lungisa Speed ​​ngokuzenzekelayo
Xa imeko ahlabayo fast, oko onokufikelela ekwehliseni izinga oluzinzileyo.
Gcina abasebenzi nokuthintela workpiece ingakrweleki.
ehamba ifayibha laser resonator wehlabathi kunye nezombane ukuqinisekisa kumatshini uzinzo ophezulu.
inkqubo nokubotshwa chuck Advanced
Chuck iziko self-hlengahlengiso, inyenyisa ngokuzenzekelayo umkhosi nokubotshwa ngokwenkcukacha iprofayili ukuqinisekisa ukuba ityhubhu obhityileyo akukho yonakele.
chucks intshukumisa Dual ziyahambelana ezahlukeneyo ngemibhobho akukho mfuneko ukuba atshintshe okanye alungise imihlathi.
stroke uqinisa Long. Xa sangqa inqawe ukusukela ngaphakathi 100mm, akukho mfuneko yokuba ukunyenyisa eligaqa.
Multi-axis (ukondla axis, umgca chuck ukuphendula ukusika intloko laser) zoqhakamshelwano ngexesha intshukumo intloko ahlabayo.
isixhobo esizilawulayo ukubuthwa
Icebo inkxaso edada uqokelela imibhobho ndigqibile ngokuzenzekelayo.
Inkxaso lencopho ilawulwa yi-injini servo kwaye uyakwazi ukunyenyisa indawo inkxaso ngokutsho umbhobho ngokukhawuleza.
Lencopho inkxaso yolawulo ukubamba umbhobho omkhulu ngqongqo kakhulu.
Inkxaso Ixabiso lencopho Automatic
Ngokutsho utshintsho sengqondo nelembande, ukuphakama inkxaso ngokuzenzekelayo licwangciswe ngexesha lenene ukuqinisekisa ukuba emazantsi yombhobho usoloko alohlukaniswa phezulu shaft inkxaso, udlala indima dynamically ukuxhasa umbhobho.
ukuchongwa komphetho welding
Isikhundla welding nokuhlangana umbhobho ziyakwazi ukuchongeka ukuqinisekisa ukuba ukuzilimaza indawo uphepha omhlophe welding phakathi kwenqubo uphephe ingxaki ugcinwa imingxuma kufuphi nokuhlangana kwayo welding.
Kuba Umbhobho kruthu kwaye likhubazeke, umsebenzi ulungiso oluzenzekelayo ungaziphumeza usiko wophendlo abamnkela, kwaye ngokuzenzekelayo ukulungisa ecaleni ukuze ufumane inqaku embindini yombhobho egosogoso ukusika ukuqinisekisa zokwehlisa ikwazi.
Xa ukunciphisa inxalenye yokugqibela ityhubhu, nemihlathi chuck ngaphambili zivulwa ngokuzenzekelayo, niwele nemihlathi chuck ngasemva ngokusebenzisa chuck ngaphambili ukunciphisa kwindawo iimfama ahlabayo.
Tube bepali ngaphantsi kwe-100 mm inkcitho engeyomfuneko nezinto 50-80 mm
Tube ubukhulu ngaphezulu kwe-100 mm inkcitho engeyomfuneko nezinto 180-200 mm
Okunganyanzelekanga - le axis wesithathu zokucoca isixhobo ngaphakathi eludongeni
Ngenxa laser inkqubo ukusika, le zeBlack nakanjani ngqo yinxalenye udonga engaphakathi kombhobho esahlukileyo. Ngokukodwa, imibhobho ngobubanzi ezincinane kuya kuba zeBlack ngakumbi. Ngokuba ezinye izicelo unzima kakhulu, isixhobo wesithathu shaft abafumana inokongezwa ukuthintela zeBlack ndingahlangani udonga ngaphakathi.
Tube laser software umatshini ukusika
PA isoftwe elawulwa-German
Enye page ugqibe isebenziseka lula yonke imisebenzi ngaphezulu!
Ngokukhawuleza wenze interface, elula kakhulu!
Yongeza i ujongano diagnosis ezimeleyo ukuba ukuxazulula ngokukhawuleza iingxaki on-site, ekrelekrele!
Lantek Flex3d uxhasa iintlobo-ntlobo pipe
uhlobo Standard ityhubhu: tube Round, isikwere ityhubhu, OB-uhlobo tube, D-uhlobo tube, unxantathu tube, tube okweqanda, njl
Nezizodwa-ezimile wombhobho ubudeki ngokulinganayo.
Kwangaxeshanye, flex3d uye iimodyuli ezisebenzayo iprofayili ukusika , nto leyo usike angle sentsimbi, ijelo intsimbi kunye intsimbi ezimile-H, njl
iintlobo esebenzayo laser ukusika tube
Uhlobo Standard (uhlobo ezivaliweyo)
tube Round, isikwere ityhubhu, tube eziziingxande, tube okweqanda, tube okweqanda, D-uhlobo tube, Triangle ityhubhu ...
Uhlobo seemodyuli (Non-closed uhlobo)
Channel steel, U-intsimbi, angle sentsimbi, T-uhlobo, H-uhlobo, uMahalati intsimbi ...
Laser iisampuli ahlabayo tube
Fiber Laser Pipe / Tube Cutting Machine Technical Ipharamitha
Akukhombise NO .: P2060 / P3080
ubude pipe 6000mm / 8000mm
umbhobho 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300
laser umthombo IPG / nLIGHT ifayibha laser
Phinda endaweni accuracy ± 0.03mm
speed ukubeka obukhulu 90m / min
Oluzenzekelayo Bundle Loader Tube Laser Cutting Machine
Full ezivaliweyo Fiber Laser Cutting Matshini ne Pallet Exchange Table
Uhlobo Open Fiber Laser Cutting Machine
Function Dual Fiber Laser Metal Sheet & Tube Cutting Machine
High Precision Linear Motor Fibre Laser Cutting Machine
Ifenitshala, nesixhobo sonyango, izixhobo ukufaneleka, ioli ukuhlola, ukubonisa kwithala, oomatshini ifama, ibhulorho, ukuthutha, izahlulo isakhiwo, njl
Tube Laser Ukucanda Machine Application Material
Round, isikwere, eziziingxande, okweqanda, esinqeni tube ngeenxa kunye nezinye nemibhobho yesinyithi.
<< Funda Okunye Tube iisampuli ezingama Laser Cutting
Ifayibha laser ukusika metal ubukhulu amandla ezahlukeneyo laser
Nceda uqhagamshelane Golden Laser ukuba iinkcukacha ngakumbi kunye nekoteyishini malunga nefayibha laser umatshini ahlabayo . Impendulo yakho lemibuzo ilandelayo kuya kusinceda sincoma umatshini zifanelekileyo.
1. Luhlobo luni metal ngaba kufuneka ukusika? Sheet metal okanye ityhubhu? Carbon steel okanye insimbi okanye i-alumuniyam okanye intsimbi kwalenza okanye yobhedu okanye ubhedu ...?
2. Ukuba ukugawula iphepha metal, yintoni na ubukhulu? Yintoni isayizi yokusebenza ntoni ufuna? Ukuba ekugawuleni tube metal okanye umbhobho, yintoni na udonga babulingana nesandla, ububanzi nobude umbhobho / ithumbu?
3. Yintoni na imveliso yakho igqityiwe? Yintoni na kwishishini isicelo sakho?
4. Igama lakho, igama lenkampani, email, ifowuni (WhatsApp) kunye website?
Full ezivaliweyo Fiber Laser Cutting Matshini ne Pallet ngokutshintsha
2kW Fiber Laser Cutting Matshini for Metal Sheet
2000W ezivaliweyo Uhlobo Fibre Laser Cutting Matshini ne Pallet ngokutshintsha. Ukucanda Indawo: 1500mm × 3000mm, 1500mm × 6000mm, 2000mm × 4000mm, 2000mm × 6000 ...
Label Laser Die umsiki